Ilay Kroaty Mpanatontosa Sarimihetsika Tsy Amerikana Voalohany Nahazo ny Oscar Tamin’ny Fanaovana Sarimiaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2017 18:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Italiano, Deutsch, 简体中文, 繁體中文, 日本語, English
Ny dikasarin'ny sarimiaina fohy nahazo loka Oscar “Ilay Mpisolo Toerana ” notontosain'i Dušan Vukotić.
Ambara izao 24 Janoary izao ny fanolorana ny Oscar. Mbola tsy misy ny sarimihetsika Kroaty mifaninana, na dia efa nampidirina hodinihin'ny tao amin'ny Akademian'ny Zavakanton'ny Sary Ahetsika sy ny Siansa ao California, manara-maso ny Oscar, aza ny sarimihetsika “On the Other Side” [Eny Ampita].
Raha ny marina, tsy mbola nisy ny sarimihetsika natao tao Kroasia no efa nahazo ny Lokan'ny Sarimihetsika Tsara Indrindra Amin'ny Teny Vahiny hatramin'ny fahaleovantenany avy amin'ny Yogoslavia tamin'ny taona 1991. Kanefa tsy midika izany akory fa tsy mbola nahazo ny Oscar mihitsy ny sarimihetsika Kroaty.
Zava-misy tsy dia misy mahafantatra loatra ny hoe mpanatontosa avy eto amin'ity firenena ity, Dušan Vukotić (1927-1998), no nahazo ny Oscar amin'ny Sarimiaina Fohy Tsara Indrindra tamin'ny taona 1961 avy amin'ilay lahatsary “Ilay Mpisolo Toerana” ( “Surogat” amin'ny teniny ôrizinaly, fantatra ihany koa amin'ny lohateny amin'ny teny alemà hoe “Ersatz”). Izy no solontenan'i Yogoslavia amin'ny sarimiaina voalohany tsy Amerikana nahazo loka. Voatahiry miaraka amin'ny asakanto kiobista ihany koa ao amin'ny Fandaharam-Pikajian'ny Akademia ilay sarimihetsika mahatsikaiky.
Fantatra ho iray amin'ireo mpanorina ny Sekolin'ny Sarimiaina ao Zagreb izay efa namokatra sarimihetsika maherin'ny 400 hatramin'ny nitsanganany tamin'ny taona 1956 ihany koa i Vukotić. Nametraka ny fenitra avo amin'ny famokarana sarimiaina any Yogoslavia any toerana ny sekoly.
Noderaina ny asany nandritra ny androm-piainany, ary azo jerena amin'ny aterineto tahaka ny “Ilay Mpisolo Toerana” ny sasany tamin'ireo horonantsariny, noho ny fahazotoan'ireo mpankafy izay efa lasa YouTubers.
Tamin'ny taona 1963, notendrena hifaninana amin'ny Oscar mitovy amin'izany ihany koa ny horonantsarin'i Vukotić iray hafa “Ny Lalao,” fa saingy tsy nahazo loka.
Anisan'ny tena ankafizin'ny mpankasitra iray hafa ihany koa ny “llay Ombivavy Eny Amin'ny Volana” izay miresaka lohahevitry ny taona 1959 ary mbola resahina amin'izao taona 2017 izao — ny fampijaliana ny malemy noho izy sy ny ‘ankizivavy ao amin'ny teknolojia.’
Tantara fohy iray hafa malaza notontosain'i Vukotić ny “Ilay Mpamaly Faty” (1958), nalaina avy amin'ny tantaran'i Anton Chekhov, Rosiana mpanoratra tantara tsangana sady mpanoratra tantara fohy.
Zara raha nirotsaka tamin'ny fanentanana tetikasa vaovao i Vukotić taorian'ny taompolo 1960, ary niasa ho mpanatontosa sarimihetsika sady mpampianatra tamin'ny fanatontosana sarimihetsika tao amin'ny Akademian'ny Teatira ao Zagreb .
Taranaka Montenegrina i Vukotić, teraka tao Bosnia sy Herzegovina amin'izao fotoana izao, ary mifanaraka tsara amin'ny tarigetran'ny fiarahamonina Yogoslavy “firahalahiana sy firaisankina” ny lova mifangaro noraisiny sy ny fonenany ao Kroasia. Na izany aza, taorian'ny faharavan'i Iogoslavia, nitaky ny lova navelany ho toy ny mahasolontena ny vondrom-poko misy azy ireo manokana ireo mpanoratra nasionalista isan-karazany. Ohatra, nampiditra azy tao amin'ny lisitry ny ” Mpandresy Oscar Serba Lehibe Fito Tsara Indrindra” any an-toerana ny tranonkalan'ny Serba ampielezana ao Canada .